I-Gmail. Uyenza njani iakhawunti yeGmail ngaphandle kwesimemo | Iindaba zeGajethi
GImeyile ukuyibeka ngamagama ambalwa iposi ye Uphando. Ngaphambi kokuba ufune ukuvula enye yezi akhawunti, kwafuneka umenywe ngumntu osele eneakhawunti ye-Gmail, ngoku akusafuneki. Nabani na ofuna ukuba ne-imeyile ye-Gmail kufuneka aye kwiphepha www.gmail.com kwaye uqale inkqubo yokwenza iakhawunti yakho. Emva kwexesha siza kubona ukuba le nkqubo yenziwa njani kodwa kuqala siza kubona iimpawu zale mveliso kwaye zeziphi iimfuno ekufuneka zihlangabezane nekhompyuter yakho ukuze usebenzise iakhawunti inbox.
Lokanye okokuqala iya kuba kukubona oko kubonelelwa yiGmail ukuze umntu ngamnye avavanye ukuba banomdla wokudala iakhawunti noGoogle okanye ukuba banokukhetha ukusebenzisa enye inkonzo enje ngeHotmail. Ke makhe sijonge ukuba zeziphi iimpawu zenkonzo:
Isisa: I-Gmail isimahla, indleko zero, "ngobuso", asizukubiza nantoni na, isimahla.
Ngaphandle kwesimemo: Njengoko benditshilo ngaphambili, awusadingi simemo sokusebenzisa i-Gmail. Njengoko uGoogle esitsho Wonke umntu umenyiwe kwiqela leGmail! ke sebenzisa ithuba.
Ngaphezulu kwe-2,5 gigabytes yokugcina: Indawo yokugcina kwiGmail ikhula rhoqo. Mzuzwana ngamnye ezinye ii-byte zongezwa ngokuzenzekelayo, ukuze ibhokisi yakho yeposi ikhule malunga ne-100 megabytes ngenyanga. Ukuba ufuna indawo eninzi yokugcina unokukhetha iWindows Live Hotmail enikezela ngoku Iigigabytes ezi-5 umthamo. Ukuba unomdla wokwenza iakhawunti ngeHotmail ungakufunda oku Incwadana yeHotmail de VinagreAssino.com
Ukhuseleko lweantispam: akhawunti yakho iza lokucoca ulwa spam. Ewe kuya kufuneka uphawule ii-imeyile ezingaxutywanga njengogaxekile ukunceda isihluzo. Umsebenzi ulula kakhulu, kufuneka ucofe nje kwiqhosha elithi "Phawula njengogaxekile" kwaye uGoogle uya kwenza okunye.
NgeSpanish nakwezinye iilwimi ezingama-39: Unokukhetha ulwimi lwe-Gmail kwi-40 ekhoyo.
Umatshini wokuphendula ngokuzenzekelayo weposi yakho: ungashiya umyalezo obhaliweyo kwiakhawunti yakho ukuze usebenze njengomatshini wokuphendula kwifowuni. Ukuba, umzekelo, uya eholideyini, ungashiya umyalezo ukuze wonke umntu okuthumelela i-imeyile azi ukuba awuzukuvula iakhawunti yakho ye-Gmail kwaye awuzukukwazi ukuyiphendula ude ubuye.
Jonga njenge-HTML: Uya kuba nenketho yokujonga iifayile zeOfisi okanye nge Ulwandiso lwePDF ngqo kwi-imeyile yakho.
Ukhuseleko lweantivirus: UGoogle uhlalutya okuncamathiselwe kwiimeyile zakho kwiintsholongwane kwaye ukuba ufumana nayiphi na into azama ukuyicima. Ngenxa yokhuseleko lwentsholongwane awuyi kuba nakho ukuthumela okanye ukufumana iifayile ezinokuphunyezwa ngeGmail ukunciphisa amathuba osulelo.
Gcina umsebenzi wakho ngokuzenzekelayo: Ukuba nangasiphi na isizathu isikhangeli sakho siyangqubana okanye ukuphuma kwamandla kwaye ubhala i-imeyile ngalo mzuzu, ungakhathazeki, i-Gmail igcina umsebenzi wakho ngokuzenzekelayo. Xa ungena ngeGmail kwakhona, i-imeyile obuyibhala iya kuba kwifolda "Yoyilo". Kuya kufuneka ucofe uyilo obusebenza kulo kwaye uqhubeke nalo.
Ncokola ngaphandle kokufaka nantoni na: Ungathetha ngqo kwiakhawunti yakho ye-Gmail ngaphandle kokufaka nayiphi na inkqubo.
Injini yokukhangela kuGoogle: Kwaye okona kulungileyo ekugqibeleni, uya kuba nayo yonke itekhnoloji yokukhangela kuGoogle onayo ukukhangela ngaphakathi kwibhokisi yakho yeposi. Ke unokufumana ngokulula nayiphi na i-imeyile oyigcinileyo.
EEzi ziimpawu zeGmail, ucinga ntoni? Ngaba uyilungele? Ewe, ukuba unomdla, makhe sibone ukuba zeziphi iimfuno eziyimfuneko ukuze ukwazi ukusebenzisa iakhawunti ye-Gmail, khumbula ukuba ukwenza nokusebenzisa iakhawunti ye-Gmail ngokupheleleyo simahla kwaye awulahli nto ngokuzama. Zizo kuphela ezi mfuno kufuneka uhlangane nazo:
Te Ndicebisa ukuba usebenzise isikhangeli esihlaziyiweyo ukusebenza ngokufanelekileyo. Nangona ikwaxhasa iinguqulelo ezindala, ndicebisa ukuba uhlaziye isikhangeli sakho kuhlobo lwamva nje olukhoyo. Uya kuzuza ngokhuseleko kwaye ngokubanzi yonke into iya kusebenza ngcono.
Uluhlu lwe izikhangeli ezixhaswayo Oku kulandelayo: Microsoft IE 5.5 okanye ngaphezulu, Netscape 7.1 okanye ngaphezulu, Mozilla 1.4 okanye ngaphezulu, Mozilla Firefox 0.8 okanye ngaphezulu, Safari 1.2.1 okanye ngaphezulu. Ukuba usebenzisa umbono osisiseko weGmail, ungasebenzisa iinguqulelo ezindala zezinye iibrawuza: IMicrosoft IE 4.0, iNetscape 4.07 kunye neOpera 6.03.
Angoku uyazi ukuba ukukunika ntoni inbox kwaye kufuneka ntoni ukuze ukwazi ukuyisebenzisa. Emva koko siza kubona indlela yokwenza inyathelo leakhawunti ngenyathelo ukuba unomdla, qhubeka ufunda le ncwadana, ndiza kukubonisa ukuba ungayenza njani inyathelo ngenyathelo:
1) Into yokuqala kukuya kwiphepha le-Gmail, nantsi ke iphepha ngesiSpanish. Xa ulapho kuya kufuneka ucofe kwikhonkco «Bhalisela i-Gmail» kwikona esezantsi ekunene.
2) Ifayile "Yenza iGoogle -akhawunti ye-Gmail" iya kuvula Ukuba isicatshulwa asibonakali ngeSpanish, tshintsha ulwimi ngokukhetha iSpanish kwibhokisi ebonakala kwikona ephezulu ngasekunene kwefestile.
3) Gcwalisa yonke idatha ebonakala kwifom. Kuya kufuneka ubeke phakathi kolunye ulwazi igama lakho, ifani kunye nesiteketiso okanye igama lokubhalisa ofuna ukulisebenzisa kunye nokwandiswa kwe- @ gmail. Ke ukuba ufuna i-imeyile "juan*********orione@gmail.com" kuyakufuneka ubeke "juan ********* orione" ebaleni "igama lokubhalisa". Gcwalisa onke amasimi kwaye ujonge iibhokisi ezikulo mfanekiso:
Ukuba ushiya eyokuqala ebhalwe "Ndikhumbule kule khompyuter" uya kungena ngokuzenzekelayo kwiakhawunti yakho ngaphandle kokufaka igama leakhawunti okanye iphasiwedi. SUKUYENZE xa usenza iakhawunti yakho yeGMAIL kwikhompyuter yoluntu okanye apho abantu abaninzi banokufikelela njengoko benokuba iakhawunti yakho ye-imeyile.
Ukuba ujonga ibhokisi yesibini uza kwenza iifayile ze Imbali yeWebhu apho zonke iintshukumo zakho ziya kugcinwa khona phezu kwenethiwekhi. Siza kubona ngakumbi malunga noku kwelinye inqaku. Yijonge okanye ungayiqwalaseli ngendlela othanda ngayo, kuyo nayiphi na imeko ungasoloko uyenza ingasebenzi iMbali yeWebhu kamva.
4) Xa unawo onke amasimi azalisiweyo, cofa kwiqhosha elithi «ndiyamkela. Yenza iakhawunti yam »Ngale ndlela uyakwamkela iimeko zokusetyenziswa kunye nemigaqo yenkonzo. Phambi kokucofa kwiqhosha, funda ezi meko kwaye ukuba awuvumelani, sukucofa, kodwa sele uyazi ukuba awuyamkeli imiqathango ngekhe usebenzise i-Gmail.
5) Emva kokucofa kwiqhosha kwaye ukuba yonke into ihambe ngokuchanekileyo ngefestile ye "Intshayelelo kwiGmail" apho imiba emithathu ekufuneka ithathelwe ingqalelo ngaphambi kokuqala ibonisiwe Funda oko ikutshoyo ukuba uziva uthanda kodwa ukuba ufuna ukuqala ukusebenzisa i-imeyile yakho yeGmal, cofa apho ithi "Ndikulungele ukufikelela kwiakhawunti yam", kwikona ephezulu ngasekunene, kwaye uya kungena kwi-inbhoks yakho (kwibhokisi engenayo) .
BEwe, ngale nto siza kuba neakhawunti ye-Gmail, ngaba uyifumene lula i-tutorial? Ngexesha elizayo xa ufuna ukubona i-imeyile kufuneka uye kuyo http://mail.google.com/ kwaye uvule iakhawunti yakho. Siza kubona kwezinye iincwadana zokusebenzisa indlela inyathelo elitsha le-imeyile ye-imeyile. Kude kube ngoko, imibuliso yomdiliya kubo bonke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » I-Gmail. Uyenza njani iakhawunti yeGmail ngaphandle kwesimemo
Izimvo ezi-187, shiya ezakho
Ndiqonde ukuba ndifuna isimemo sokwenza i-imeyile ye-gmail
Hayi Paula Landela inyathelo ngenyathelo lokufundisa kwaye uza kubona ukuba ungayenza njani iakhawunti ye-gmail ngaphandle kwesimemo. Ukubulisa.
Sele ndinayo gmali yam enkosi
UAna Erika Bermon Lopez sitsho
ubusuku obuhle ndinqwenela ukonwaba xa ndenza iakhawunti yam entsha ye-imeyile enkosi ngokundamkela… ..
Phendula kuAna Erika Bermon Lopez
Ndifuna iakhawunti kwiGMAIL
Molo WONKE UMNTU, awudingi ukucela isimemo seGmail kwizimvo zakho. Funda inqaku kwaye uza kubona ukuba uyenza njani iakhawunti ye-gmail ngaphandle kwesimemo. Ukubulisa.
iikhampasi zeemoto sitsho
Ndifuna ukuvula iakhawunti entsha
Phendula iicarmen campis
Ndifuna ukufikelela kwi-imeyile ye-gmail. njengam?
Phendula u yudy
Yudy ufunde inqaku 😉
Ndifuna ukwenza i-imeyile ukuze ndisebenzise ukudibanisa nabahlobo bam basinike iinkcukacha ukuze sikwazi ukwenza nceda ukuba
Ngentlonipho yonke abantu abahle abathi ngalo mzuzu bajonge ngamehlo abo amahle ngamehlo abo amahle, la mabinzana amancinci abhalwe ngalo lonke uthando, ukunyaniseka, unyamezelo kunye nenzondo emhlabeni kufanelekile. "Ndifuna iphepha" enkosi
UHeidi Rocio Lopez sitsho
Ndidinga ukwenza i-imeyile yam kuba ibalulekile kubuchwephesha bam, ke ndiyathemba ukuba uya kundinceda ngalo msebenzi. Ubenemini emnandi, emva kwemini okanye ebusuku nokuba ngubani ofunda lo myalezo.
Phendula kuHeidi Rocio López
stella maris sitsho
Ndonwabile ukuba ngenye imini ndibhalisele iakhawunti yeGoogle. ngoku ndifuna ukubuza, ithini iakhawunti kaGoogle, kwaye emva koko ndifuna ukungena kwi-ADWORDS, kwaye xa ndibhala ipassword iyayala. Ndingenza ntoni? Ukuba ungandinceda, enkosi. stella maris
Phendula stella maris
Molo uStella, ndiyamangaliswa kukuba ungazi ukuba yintoni iakhawunti kaGoogle, ufuna ukubhalisela iAdwords, ekucingelwa ukuba kunzima ukuyazi. Ngayiphi na imeko, iakhawunti kaGoogle ikunceda ufikelele phantse kuzo zonke iinkonzo ekubonelelwa nguGoogle, ezinje ngeGmail, iGoogle, Thetha, izixhobo zeWebmaster, iAdSense kunye neAdWords, phakathi kwabanye. Ukuba unako ukufikelela kwi-Gmail kuya kufuneka ukwazi ukufikelela kwi-Adwords.
Ndingathanda ukufumana iakhawunti
Masibone ngabo bonke abangekazifumani. Awudingi isimemo seGmail, landela nje amanyathelo kwisifundo. Imibuliso kubo bonke.
Ndidinga iakhawunti ye-gmail ukuze ndincokole i-ps kwaye ke ndidibane nabantu abaninzi abavela kwiindawo ezahlukeneyo
Ndingathanda ukuba neakhawunti ye-gmail ukuze ndincokole nabahlobo bam, ukongeza ekukhangeleni ulwazi lwezabelo zam zesikolo.
Ndithumela oku ngakumbi ukuze ndibone ukuba uMnu Killer Vinegar okanye nabani na onokundinceda:
Kuyenzeka ukuba sele ndenze iiakhawunti ezimbini kwi-gmail ngenxa yokuba xa ndifuna ukongeza kunxibelelwano lwam lwe-hotmail lindixelela ukuba liza kuthumela isimemo nezinto ezinjalo kwaye ekuhambeni kwexesha andinakuwenza umsebenzi wam. , Esiza kuncokola nabafowunelwa bam kwi-hotmail. Ndiyazi ukuba unakho ngoba umntu uneakhawunti ye-gmail kwaye ndiyazongeza ngaphandle kwengxaki kwaye amaxesha ngamaxesha siyancokola kwaye sitshintshisane ngezimvo zomsebenzi kuba umsebenzi wam ufuna kakhulu.
Sele ndiyenzile into andixelele yona umhlobo wam ukuba abhalise iakhawunti yam ye-gmail kwipasipoti kwaye ayisebenzi, uthi iiakhawunti zigcinelwe i-hotmail kuphela, oko kukuthi, i-gmail ayinakwenziwa.
Ndidiniwe kukukhangela izisombululo kwaye khange ndikwazi ukusombulula nceda umntu andixelele ngesifundo okanye into efana nokusebenzisa iakhawunti yam kwaye ndincokole nge-hotmail.
I-Algenis ndicinga ukuba into oyifunayo kukusebenzisa i-imeyile yakho ukuze uthethe nomthunywa, akunjalo? Xa ndinokufika kuyo. Umbuliso.
Andazi ukuba ndiyenze njani iakhawunti kuba zonke iinzame endizenzileyo aziphumelelanga
Andazi ukuba ndiyenze njani i-imeyile ngale khowudi ***** @ gmail.com !!!
Ewe, yitshintshe okanye ungeze inombolo ekupheleni kwe-imeyile. Ngokuqinisekileyo omnye umsebenzisi we-gmail sele enayo loo akhawunti.
Qaphela ukuba andifuni ukuba igama lam lokwenyani livele, kwaye uGoogle uyandibuza ngenxa yokuba ayindamkeli xa ndizama ukubhalisa, kuba andinamdla kwi-yahoo ,, hotmail, kulungile abanye, kodwa ndenza ntoni, Sele ndiwenzile la manyathelo kwaye andifuni kwamkela, oh hayi, njengoko ndizisola, bendicinga ukuba kulula.
Ewe, andilupapashi olunye uluvo, andazi nokuba kutheni bezifunda ngaphambi kokuba zipapashwe okanye kutheni ndihlekile ukuba zidibanisa kangakanani ukuya ku-3 + 2, ekufuneka ikukuthintele ukubetha okuqhubekayo.
Ungakanani umonde, iviniga yinyani, ndiyavuyisana nawe, kuba apha kukho abantu abathi, njengoko benditshilo, bayakwazi ukubhala kodwa ababonakali ngathi bayakwazi ukufunda-.
Andazi ukuba awubathumeli njani hellooooooooooooo
Ngethamsanqa, inyani kukuba uyayifuna ^ ^
Ewe, ayityatyambi, mhlawumbi ndiyicimile, ngamanye amaxesha ndibona ububhanxa kwaye ndiyisusile, kuyenzeka kananjalo ukuba ukuba izimvo zinento engaqhelekanga, inkqubo iyayicima. Ngapha koko enkosi ngamazwi akho. Ndiyathemba ukuba incwadana ye-gmail iluncedo kuwe. Umbuliso.
IsiJamani siqaphele ukuthandabuza kwakho. Umbuliso.
IJamani yesiJamani sitsho
Ndingayazi njani idilesi ye-imeyile ye-imeyile efunyenwe kwiakhawunti yam ye-GMAIL?
Phendula Curiel waseJamani
UTomas Martinez sitsho
Ndicinga ukuba inkonzo yakho intle kakhulu
Phendula uTomas Martinez
Ndifuna ukufumana iakhawunti yoMyalezo kwiGmail ...
Ndifumene enye, kodwa kwavela ii-imeyile kuphela
Ndingathanda isikhokelo sokuba ne-Msn Gmail yam, nceda… Enkosi 🙂
ALEJANDRO ALMEIDA HENRIQUEZ sitsho
NDIFUNA UKUVULA LESI SIQINISEKISO UKUZE NDIBONE OKUHLE KWE-GOOGLE
Phendula kwi-ALEJANDRO ALMEIDA HENRIQUEZ
NDIFUNA UKUVULA ELI BHALI UKUZE NDIBONE OKUPHELELE KWE-GOOGLE NE-YOUTUBE
Molo, kuba isifundo siyabiza kakhulu, enkosi kakhulu ngolwazi,
kodwa kuyacaca ukuba ndingena kangakanani ukwenza iakhawunti ye-gmail,
Ndifumana iphepha elingafumanekiyo, kwaye emva kohlaziyo,
akukho nto, ayindivule,
kwaye ukuba ayivuleki kum, andinakuyenza,
Ndingayivuyela loo nto.
UCamila andinalwazi lokuba ingaba yintoni ingxaki yakho, zama ukufaka i-firefox ukuze ubone ukuba isebenza njani.
Ndingathanda ukuba neakhawunti kunye nawe kuba uphawula ukuba imeyile ngokukhawuleza.
NDINGATHANDA UKUBA NE-AKHAWUNTI YASEGIMA NGOKUBA NDANDIXELELWE UKUBA KULUNGILE.
Phendula u NOE
UCarolina lozano sitsho
Ewe inyani yile, andiyithandi inkonzo ye-gmail yokwenza iakhawunti kuba kunzima ukwenza iakhawunti.ngumsebenzi abandishiyileyo
Phendula uCarolina Lozano
Yulexza garcia sitsho
Molo ngokuhlwa ndibhalela eli phepha kuba ndinenkxalabo endingakhange ndiyisombulule ixesha elide ... ingxaki yam yile ilandelayo, ndenze iakhawunti ye-gmail endiyilibeleyo iphasiwedi kunye nempendulo yombuzo oyimfihlo othumele umyalezo ukuseta kwakhona iphasiwedi kwiakhawunti yam yesibini kwaye ayifikeleli kum. Ndiyigcinile i-imeyile ethunyelwa yi-gmail kwezinye iiakhawunti ezinekhowudi yokuqinisekisa kwaye ichaza apho ukuba inokusetyenziswa xa kukho ukulibala igama eligqithisiweyo okanye unayo nayiphi na ingxaki ngale khowudi. Ndiyayifuna loo akhawunti, ndingayenza njani… enkosi kwangaphambili ngempendulo 🙂
Phendula uYulexza Garcia
Yulexza andazi ukuba kuqhubeka ntoni, ithiyori kufuneka i-imeyile ifike kwiakhawunti yakho yesibini.
Ndingathanda ukuvula i-imeyile kwi-gmail, ndenza njani?
Ndicinga ukuba inezibonelelo ezininzi ngokweengcaciso ezivela kubahlobo abanazo
Inezinto ezininzi eziluncedo, ezinje nge, indawo ethe kratya, ikhathalela ugaxekile, njl.
Molo ndifuna ukwazi ukuba ndingayifumana njani i-gmail messeger, sele ndinayo iakhawunti kodwa ndifuna i-messeger, com Hotmail. enkosi
HoLaAAaa .. !!!! MuuUUchAaaAsSS grAaaCiAssSS… hehehe isifundo sakho sandinceda kakhulu ekwenzeni iakhawunti yam ye-gmail .. !!
enkosi .. !!!!!
omnye umbuzo .. !! 😀
Ngaba i-gmail inayo msn ????
Molweni nonke, umthunywa we-gmail ubizwa ngokuba yi-gtalk kwaye unokuzikhuphelela kwiakhawunti yakho. Ukuba awazi, jonga i-gtalk kwi-google. Umbuliso.
URoberto carlos sitsho
Ndifuna ukwenza i-imeyile entsha ye-gmail
Phendula iroberto carlos
Ndifuna ukwenza i-imeyile ye-gmail. ilungile weno ndiyakuthanda xaus kisses
Umntu othile nceda uphendule kwaye kwi-hotmail ndingathanda nokwazi, ndiyazi ukuba ngaphambi kokuba kwenzeke kodwa ngoku kunye neefestile eziphilayo njengoko bekhubaza ukhetho.
haayy ndifuna ukuvula iakhawunti kwi-messeger kwaye andikwazi !! hehe
Enkosi ngolwazi, kodwa, ndizama ukwenza iakhawunti kwaye ndibeke onke amagama agqithayo athi afike kum kwaye ithi "igama eligqithisiweyo alisebenzi" emva koko, ndifuna ukwazi ukuba kufuneka ndibeke inombolo okanye izinto ezinje
UAyun ubeke umzekelo oonobumba abane emva koko alandelwe ngamanani amane akufuneki ubenangxaki. Yiphakamise kakuhle.
kuba xa ndifuna ukufikelela kwiakhawunti yam ye-gmail andikwazi,
Ndingena kwiphepha likaGoogle emva koko ndifuna ukungena ngeposi iphepha lilayishiwe kwaye lindixelela ukuba iphepha alinakuboniswa, ndifuna impendulo kule ngxaki inokwenzeka, enkosi kwangaphambili.
U-Ernesto usebenzisa i-firefox ukungena kwi-Gmail.
cifuentes zemarcela sitsho
Molo, uyazi, andikwazi ukwenza iakhawunti njengam.
Phendula i-cifuentes zemarcela
UHUGO VESGA sitsho
NDINE-AKHAWUNTI ZE-GMAIL ezi-2 kwaye ANDINAKUFUMANEKA KUZO, NDENZA NTONI, NDIKE NDIZAMA IINTSUKU EZINTATHU, NDINOKUFIKELELA KWAMANYE AMA-IMEYILI ANJENGAYO YAHOO, HOTMAIL, ingaba iya kuba yi-PC yam okanye kwenzeka ntoni? nceda ndifuna impendulo ekhawulezileyo, njengoko ndinolwazi lokufumana kwakhona.
Phendula HUGO VESGA
Hugo, kuya kufuneka utsho ukuba kwenzeka ntoni kanye kuwe xa uzama ukuvula iakhawunti yakho ye-gmail.
yonan perez sitsho
Molo KUZO ZONKE I-VINAGRE ASSESINO LE NGCACISO EFANELEKILEYO NDISELE NDIYOKWENZA IGMAIL YAM NDIBULELE KAKHULU ...
Phendula yonan perez
Ndidinga ukwenza iakhawunti kwi-gmail
Ndifuna ukuvula enye iakhawunti kwi-gmail kodwa andikwazi. Ndicinga ukuba kwenzeka ntoni kukuba imiyalelo yeyabantu abakrelekrele, kwabo baluqondayo olu lwimi, hayi iziwula (abalandeli). Ezi zokugqibela ziphumelele ngakumbi.
Kutheni ndingenakunceda ukuvula iakhawunti yeGmail.com. Kuphela yiakhawunti yam evelayo kwaye khange ndiyicele lonto
Phendula u-maria teresa
Ndifuna ukuba yibhubhu kuwe kodwa andiyifumani indlela.Bandinike isimemo kodwa akukho ndlela ndinokuyenza.Ngaba ungandinceda okanye undinike isimemo?
Ndifuna ukwazi ukuba ungayongeza njani i-akhawunti yesibini kwi-Gmail. Ndinayo kodwa ndifuna enye enegama elahlukileyo, (umzekelo: molo@gmail.com kwaye hello2@gmail.com) Kwaye ndifuna ukwazi ukuba ndingazifumana ii-imeyile zentsimbi yesi-2 kwiakhawunti enye ye-gmail. ukuba kukho umntu owaziyo nceda ubancede !!!
Ndingathanda ukwazi ukuncokola nomntu one-gmail, ndingenza ntoni?
molo, andiyiniki ingxelo. Ithi igama lam ayilo gmai okanye google ndenza ntoni
oli, igama lam ngu-tahia kwaye ndifuna i-gmail
oku kulungileyo i-turotial m yasebenza kakhulu
Molo, ndingathanda ukwazi ukuba ndingayivula njani iakhawunti ye-gmail ngokunyanisekileyo ukuba ndinomdla kwaye sele ndizamile amatyeli amaninzi kwaye ayinakuvulwa. Ukuba umntu angandikhokela, ndingayixabisa, ndiyathemba ukuba umntu othile angayenza.
Phendula uM Mareza
U-Enrique Molina sitsho
Enkosi ngolwazi, ndiza kuzama ukuvula iakhawunti.
Phendula u-enrique molina
Xa ndingena kwiakhawunti yam kwibar kaGoogle, ngamanye amaxesha ivula ngokuthe ngqo kwaye ngamanye amaxesha indicela igama le-imeyile kunye negama lokugqitha, emva koko ivule peeeeeeero !!! Ngokukhawuleza ndifumana iwindow ethi ndiyishiyile iakhawunti kuba omnye umsebenzisi uqhagamshele i-blah blah blah ... Kule khompyuter »njl njl ... Nokuba kunjalo, umqulu ngalo lonke ixesha ndifuna ukuwuvula, kwenzeka ntoni? Isonjululwa njani? Ndiyabulela kwangoko
Ngokulula, ndingathanda ukwenza enye iakhawunti ye-gmail ukuba yongeze kwiibhlog zam ukuze ndenze ikhonkco lam xa ndibandakanya iifoto ...
molo kakuhle isifundo silunge kakhulu ... kwaye ngaphambi kokuba ndicinge ukuba ukwenza iakhawunti ye-gmail isimemo sasiyimfuneko
Ndiyabulela kwesi sifundo ndakwazi ukwenza iakhawunti yam ye-gmail ...
molo ndifuna ukwenza iakhawunti ye-gmail ndiyidinga ukuba neefayile ezigcinwe plishs igama lam ndingu-mailen ainara ferro.
Ndiyabulela kakhulu, bendingazi ukuba neakhawunti ye-gmail. Bendimdinga kakhulu. Enkosi kakhulu kunye nemibuliso.
Inkwenkwezi encinci sitsho
Molo, sele ndinayo iakhawunti ye-gmail kwaye ndingayivula kwi-messenger kodwa abafowunelwa kum be-gmail ababonakali njengoko ndibathumela ngaphandle? enkosi
Phendula inkwenkwezi encinci
Ndingathanda ukwenza i-imeyile ye-gmail ukuqhagamshela kwi-iphone yam
UMaria Laura sitsho
Ndifuna ukufumana i-gmail kodwa andazi ukuba ndenze njani, enkosi
nantoni na indithumele i-imeyile kwi-imeyile yam
Phendula u maria laura
Molo, jonga, ndingathanda ukwazi ukuba ngubani owaziyo ukuvula iphepha lewebhu.
andrea trobajo rodriguez sitsho
Ndifuna ukwenza iakhawunti yam ye-gmail
Phendula urea andrea trobajo rodriguez
Ndingayenza iakhawunti yam kwi-gmail!
uxisss io tb kero a gmailll engakanani nceda ndiyidinge i-porfisss
Ewe, ulwazi lwalubonakala ngathi aluphelelanga
Phendula u-el matatan
Molo, igama lam ndinguKarolina, bendizama ukwenza i-imeyile kwi-gmail kwaye khange avume naliphi na igama okanye isiteketiso kwi-imeyile, ngaba umntu othile angandiphendula, nceda nceda
Phendula u karolina
Ndenza ntoni ngekhowudi yokuqinisekisa ukuba bandithumele kwi-imeyile yam? Iyandinceda andiyiqondi kakuhle i-gmail .. !!!
umntu onokuphendula umyalezo wam kwi-imeyile yam ngu vely1525@gmail.com
Edinson kunye neres sitsho
Phendula Edinson andres
Zihlobo, ndineentloni ngokungazi kwam kobuntwana, kodwa ndixoxa njani kwiakhawunti yam ye-gmail?
Hayi, kodwa zinjani! Ndicinga ukuba zonke ziyiSpanish, ngaphezulu ikuxelela ukuba ungaziqondi njani kwaye ungaziqondi kwaye wenze i-condorox, nge-gtalk, ewe ayilo phepha lencoko eli, kukuncokola nabafowunelwa, njenge-msn, ngamafutshane. yeyona ilungileyo kwaye iphela yeyona ilungileyo, ingekuko ukungazi nto abangaziyo ukuba zezabo izicelo zabo ... UKUSEBENZA!
jonga, ndifuna ukwenza iakhawunti ye-msn. Igama lam ndinguPaola kwaye akazukundivumela ndiyibeke, ayisiyiyo ukuba sele ikhona kuba umzekelo ndibeka: paola3hidiudhk@hotmail.com Kwaye indixelela ukuba igama »paola» alivumelekanga: S ndingenza ntoni? cnt xfavor
Ndizama ukwenza iakhawunti kwi-gmail, kodwa ndibeka ileta kunye nexesha kunye negama ukuze liphele ngokwandiswa @gmail kodwa iyaliwe .... ukuba umntu angandinceda
molo m, kwaye udlulisa i-gmail
molo… Ndifuna ukwazi ukuba ndingayenza njani iakhawunti yam yomthunywa ku-gmail.com
kwaye kufuneka ndazi ukuba uyakwazi ... !!!
ungandixelela ukuba ndingawenza njani umthunywa wam ku-gmail.com
Molo apho…. Ndingathanda ukwazi ukuba ndingayenza iakhawunti ye-gmail kwiziko lam lesundu .. Ndifuna engxamisekileyo
Ukufihla i-yireh sitsho
Molweni kubo bonke abahlobo bam abavela kwihlabathi liphela ... imibuliso kubo bonke noxolo kunye nempumelelo kubo bonke abo bayikholelwayo kwaye bayifumana kwi-aça de PANAMA ...
Ndinombulelo ngeli galelo ... ndizamile kaninzi ukuvula iakhawunti yam kwi-gmail kwaye inyani kukuba andinakukwazi ... enkosi kolu qeqesho lubalaseleyo kwaye ndiyakonwabela ukufikelela kwiakhawunti yam kwi-gmail ...
ENKOSI KUBO BONKE…
INDLELA YOKUHLONIPHA ……… ..
Phendula kwi-yireh concepcion
Ndineakhawunti yam ye-gmail kwaye ndifuna ukuyenzela enye intombi yam kodwa andikwazi, ndingenza ntoni?
Ndiyithandile kakhulu, kodwa kungangcono ukuba bongeze ividiyo kuba ngaloo ndlela kuya kuba lula kakhulu
Mholweni! emva kokuba ndiyinike »ndiyavuma ukwenza iakhawunti yam» indicela inombolo yefowuni ephathekayo ukuba indithumele ikhowudi yokuqinisekisa. Into kukuba, ndibhala inombolo yam yeselfowuni kwaye ayiyiboni. Ndivela eVenezuela. ngokubhekisele
URuth unika sitsho
Andazi ukuba ndenza njani iphasiwedi
Phendula uruth la unika
molo ndingathanda ukuba ne-gmail okanye i-akhawunti ye-yahoo ukuze ndincokole, kufuneka ndenze njani
Molo ndizama ukwenza iakhawunti yam ye-gmail kodwa indicela inombolo yeselfowuni ukuba indithumelele ikhowudi yokuqinisekisa kwaye ndiyibeke kwaye emva koko ayindithumeli nantoni na andazi ukuba kungenxa yokuba inkampani yam ayihambelani okanye uGoogle akandifuni ngethemba kwaye ndinako ukunceda i-TY
Igama lam ndingu-ignacio podesta kwaye ndifuna ukuvula iakhawunti kodwa ayindivumeli ngegama. Ithi kufuneka isuke (AZ), IINOMBOLO ZISUKA (0 TO 9) KUNYE NEENGCACISO KUPHELA. Ndifuna ukubizwa ngeakhawunti yam ignacio.podesta@gmail.com o ignaciogs@gmail.com o igp@gmail.com ke kodwa ihlala indixelela impazamo. Iyandibhida
molo: iviniga andazi kutheni ndingakwazi ukuvula i-imeyile yam kuba xa ndiyizama indixelela kuphela ukuba yiakhawunti engasebenziyo kwaye andisazi ukuba ndithini kwakhona… ndincede! Kukho enye into, ungabaphenduli abantu abakubuza into enye kuphela kuba oko kuthetha ukuba abazifundanga ezinye izimvo, ndiyayenza, kodwa ndiye ndabona ukuba akukho mntu unengxaki yam efanayo, inye kuphela kodwa Impendulo oyinike yona ayisebenzi kum
Ndingathanda ukudibana nabahlobo abaninzi ngale ndlela, ukuba umntu ufuna ukuba ngumhlobo wam, nceda unxibelelane, sele ndiyintombazana entle emnyama kakhulu
Andifumani myalezo ubuya kwifowuni yam, ndisebenzisa i-telcel
Molo, ndenze iakhawunti yam ye-gmail, ndathumela i-imeyile yokuqala, ezinye iifoto zithathwe kwi-intanethi, uGoogle kwangoko, emva kokuba ithunyelwe, iakhawunti yakhubazeka okwethutyana ngenxa yokusetyenziswa gwenxa, yathi .. ndenze ntoni?! inombolo yefowuni ephathekayo yokuqinisekisa iakhawunti, ayithathi naliphi na inani elizama ukulayisha. Kwangelo xesha, ndinayo kwenye idilesi yemeyile, i-imeyile eyamkelekileyo endithunyelwe yiGmail, enekhowudi yokuqinisekisa, andazi ukuba izakufana, kodwa andikayifumani indawo yokuyifaka. Nceda??
molweni guys ninjani ?????????????????? Ndingayenza njani iakhawunti yokuncokola nceda ... ukuba uyazi ndibhalele, ukuba yinkwenkwe, uya kuba nethamsanqa lokuhlangana nam
Isebenza njani lento ndifuna ukwenza iakhawunti ye-gmail kwaye ayizukuvumela umntu andincede, yenzelwe ukundinika imisebenzi nezinto ezinjalo.
Molo Mnu Vinegar, hum ndilandele amanyathelo owathathayo kodwa xa ndifuna ukufikelela bayandibhalela ukuba kukho impazamo kwaye kufuneka ndingenise idatha kwakhona ... enkosi ngempendulo
zintle tapia sitsho
Undicela inombolo yam yeselfowuni kodwa andiwufumani umyalezo
Phendula katheren tapia
Undibuza inombolo .. Ndiyibekile kodwa indixelela ukuba ifomathi ayilunganga .. Ndizamile kunjalo kodwa akukho tyala ...
njengoko ndisenza ??
Undibuza nenombolo yam, ndiyifake kwaye umyalezo awufiki kum. Ndinabahlobo abaliqela abanento efanayo. Kuyabonakala ukuba uGoogle akavumelananga kakuhle neenkampani zeefowuni zaseMexico. Apho unokwazi ukuba kubaluleke kangakanani kubo ...
WOW, ENKOSI, NDILAHLEKILE INOMBOLO YAM NOMYALEZO WUFUMANA UMYALEZO ENKOSI KAKHULU, KULUNGILE, UNCEDO LWAKHO
Usisidenge kangakanani, nonke nibonakala ngathi sudakas!
Phendula ku Chaval
yintoni le ikrelekrele aaaaaa hlaziya ukuba uyacelwa.
Ewe, imeyile kufuneka ibe
ngcono kwaye inokuvulwa
njengokuba sifuna eeeeeeeeeeee
Ndifuna ukuba iakhawunti yam ibekhona erlantzfer@gmail.com kodwa andizukuzivumela ukuba kutheni
tina lopez sitsho
molo ndifuna ukuvula iakhawunti andinakuyenza
Phendula kutina lopez
ana mendoza sitsho
kuba andinakuba nayo ikhulu kwi-gmail, umntu oza kundinceda kubalulekile eyunivesithi
Phendula ana mendoza
Iviniga kuba hayi xa ndiyenza yonke le nkqubo ndifumana ukuba inombolo yeselfowuni ayaziwa kwaye ukusuka apho ayindivumeli ukuba ndinyamalale, ndithumela umyalezo wesisombululo kwaye abandixeleli kwanto.
Molo VINEGRE, KUKHANGELEKA KAKUHLE KUM KUM UKUBA WENZE, UKUSINCEDA KULABO BANGAZIYO NGALO MBANDELA. KUKHO UMBUZO WAM OYA .... NDIYIVULELA NJANI I-HOTMAIL YAM NE-MSN YAM KWIKHOMPYUTHA APHO I-MSN INGABEKIYO? INGABA NDINGAYENZA KWI-INTERNET? NGABA IKHO IFOMU? IMIBULELO EMININZI
Phendula kwi ISABEL
Le imeyile yokuntywila iqhubeka indibuza ukuba isebenze ndiyinike inombolo yam yeselfowuni
Ulaura cristina valencia sitsho
Ndicinga ukuba kupholile
Phendula laura cristina valencia
Molweni nonke, i-imeyile ye-imeyile ukuza kuthi ga ngoku yeyona ilungileyo onokuba nayo, (ukuba ukhe wayizama awunakunika izimvo), olona lubabalo inkulu kukuba xa usenza iakhawunti unokufikelela kuyo yonke itekhnoloji kaGoogle, (amaxwebhu , iikhalenda, iisayithi, iibhlog, njlnjl kwaye konke simahla), kwiminyaka embalwa edlulileyo ndazisebenzisa ngokupheleleyo ezi zixhobo zewebhu kwiiklasi zam.
INGXAKI KUPHELA INGXAKI YOKUBA NGOKU KUFUNA INOMBOLO YEFONI YOKWENZA I-AKHAWUNTI, apho yayijija khona.
Uxolo ukuba khange wenze iakhawunti ngaphambili
laura santos sitsho
Ndidinga ukuba neakhawunti ye-gmail e-1 kodwa ndizamile amatyeli amaninzi kwaye andinathamsanqa, ungandinceda rrrrrrrrrrr
Phendula laura santos
Molo, unjani? ... Ndinengxaki enkulu kwi-gmail ... emva kokugcwalisa yonke idatha kuya kuvela iwindow yokuqinisekisa kwaye ukuba unayo okanye kufuneka ubeke ifowuni yakho ... ndivela eArgentina kwaye nini beka inani eneempawu kwaye yonke into indixelela ukuba ifomathi ayilunganga, ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba loluphi uhlobo oluchanekileyo lwefomathi?
Mholo. Kwenzekile kum ukuba bayakukhubaza iakhawunti yam ... kananjalo abafaki iinombolo zefowuni eziza kuthi ngokuqinisekileyo zindenza ndingathembi ... inyani kukuba ndiyayisebenzisa ukusebenza kwaye abafowunelwa bam banayo loo imeyile .. Kuyadabukisa ukuba akukho mntu ukunika impendulo enye kuGoogle.
Phendula ku chechu
camila imercedes sitsho
ngenisa eli phepha ndilincomile
Phendula kwi-camila mercedes
Ndiyenzile le akhawunti isuka kwelinye ilizwe kwaye andinakho ukuyisebenzisa eCuba, nditsho nokufikelela kuGoogle kwaye ndikwazi ukuvula iakhawunti yam, kodwa xa ndizama ukuthumela i-imeyile indixelela ukuba andinayo imvume yokusebenzisa le akhawunti. . into endiyenzayo?
I-hopla sele iyenzile i-gnail yam..andikwazi ukufaka i-imeyile yam ... kufuneka ndenze ntoni
Ndenza ntoni okanye ndiyisombulula njani le ngxaki andinakukwazi ukuyifaka kwi-gmail yam .. kodwa sele ndingene kwi-nensajeria yam ngokwenza i-gmail. waltinta@hotmail.com ukuze undithumele izikhokelo ukusombulula le ... kulungile enkosi
Hee wena uvela kwi-gmail kuba awuyilungisi inkqubo yakho eehhhhh !!
umntu ufuna ukwenza iakhawunti ye-ps
Sele ndinayo iakhawunti ye-gmail kodwa ayingeni ukubona iposi yam, ayimbi kangako, njengoko ndenzile ukubona i-imeyile yam, nantsi ndiyishiya enye iposi ukuba inempendulo.
namhlanje thetha bonoto ndingoyena mfana uyinzwana siono nooooooooooooo out of here
ukuba largoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooopa ​​umsebenzi
Nceda undinike iakhawunti kwi-Gmail, andikwazi ukuyenza dedddde aqqqqqqqqquuuuuuiiiiiiiiii shit
Kude kube nini ndizama kwaye ndingakwazi ukudibanisa
Andikwazi ukuvula iakhawunti kwi-gmail
ndicela undithumelele isimemo
Uluhlu lwamagama egama ALINA sitsho
Andazi ukuba ndiyisebenzisa kanjani !!!
Ndacinga ukuba yayikukudala iakhawunti engekhoyo ukufikelela kwiiblogi ezininzi ezinobugqwetha ezikucela iakhawunti ye-gmail kunye negama lokugqitha kuba boyika ukungaziwa;
Ngokuqinisekileyo andifuni enye iakhawunti, kuthiwa ziingcali ezininzi zonyango ukuba iiakhawunti ezininzi ze-imeyile zinokubangela uxinzelelo kunye nokulahleka kwememori;
Sele ndinayo i-hotmail kwaye iphelile, ewe ndinayo enye evela kuGoogle kunye nenye kwiforum kodwa zizinto ezahlukeneyo.
Mva nje ugoogle uyadanisa, unika iinkonzo ezithatha ixesha ukulayisha, kubantu abazizityebi abane-intanethi engenamda, i-90% yabemi ikudidi oluphakathi, inyathelo elinye kude ekubeni lihlwempuzeke ukuba alisebenzi, kwaye lisebenzisa iinkonzo ezisisiseko ze-intanethi njenge I-adsl okanye umnxeba wentambo, ezi nkonzo zintsha zikaGoogle zifana nebha ecaleni kwaso kunye nomlayishi wayo wemifanekiso yenza ukuba ubone ukuba kuya kufuneka ubahlawule ukuze bakunike inkonzo yakudala, apho bafuna ukuphulukana nezigidi zabakhenkethi.
Ndifuna ukuvula u-facebook kwaye andazi
Nachira hernandez perez sitsho
Phendula u-nachira hernandez perez
ULucia Ferreira sitsho
ngaphezulu kodwa andikwazi ukuvula iakhawunti yam entsha
Phendula lucía ferreira
Ndifuna ukuba neakhawunti nawe kuba undixelele ukuba intle kakhulu
kwaye kuba kuhle kakhulu ekuthetheni kakuhle kakhulu ... !!!!
Ithetha ntoni iWebhusayithi
kulungile mna xa ndisenza iacobo yintoni eyadlulayo eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Ndilenza njani iphepha? Ndixelele
ipholile kakhulu i-locotrone
Ndifuna ukwenza iakhawunti yomthunywa evela kwi-gmail okanye ndinamangeniso amabini anamagama ahlukeneyo kwi-hotmail messenger. kunokwenzeka? hlula nje umsebenzi kwintlalo. Ndiyabulela kakhulu
Ndidinga ukwenza iiakhawunti ezingaphezu kwe-100 ze-hotmail ngosuku kodwa iiwindows zihlala kwiphepha alisandivumeli ukuba ndenze u-3 okanye u-4 ukuba uyanceda kakhulu. broker2029@hotmail.com
hla noc ukuba kungcono i-gmail okanye i-hotmail?
Yinto yokwenza ukwazi ukwenza iakhawunti
Phendula kwi- Junnyluisvargas
Ndifuna i-gmail ndiyayidinga
Kungenzeka ukuba ne-akhawunti ye-Hotmail kunye ne-akhawunti ye-Gmail kwikhompyutha efanayo.
UJorgef Fernandez Bustillo sitsho
Ndineakhawunti ye-gmail kwaye ndifuna ukuvula enye inelinye igama, kodwa ayizukundivumela ndingenise ipassword, njl
Ngaba kunokwenzeka ukuba uneakhawunti ezimbini kwi-gmail?
Phendula u-jorgef fernandez bustillo
Molo unjani? sitsho
Molo, mhle kangakanani umntu okwaziyo ukuba abafundise ntoni abo bayaziyo
Phendula u-hello, unjani?
Ngaba i-imeyile okanye i-imeyile eshushu ibhetele? Ucinga ukuba yeyiphi engcono
Bathumele ikhowudi yokuqinisekisa iakhawunti yam nge-gmail kodwa andazi ukuba ndiyithumele njani ukuze ndenze iakhawunti yam
i-imeyile yeyona ilungileyo
Zingaphi iiGybabytes endinokuzigcina kwinkampani yasimahla yeakhawunti ye-Gmail.
Nceda ndifuna i-imeyile i-imeyile endandinayo kodwa andizukufumana uncedo
Ndizama ukuvula iakhawunti kwi-gmai, kodwa rhoqo kwinxalenye apho kufuneka ndibeke khona i-imeyile ndibomvu kwaye andazi ukuba kutheni.Ndizamile ngoonobumba, amanani kunye nezinye kodwa akukho nto. into endiyenzayo?
USandra uphawule: sitsho
Molo, andinayo i-gmail, kufuneka ndibenayo, ndibeka iakhawunti ye-gmail, andazi ukuba kwenzeka ntoni, kwaye ndizamile amaxesha amaninzi, ukuba ungandinceda ngcono, nceda undincede, kuba ndifuna ukuthetha nabazali bam abaseBarcelona kwaye ndise-england ndincede ndifumane iakhawunti kwi-gmail ba nceda ndiyazi ukuba unako kwaye undenzele yona nceda kuba ukuze ndikwazi ukuthetha nabazali bam, ndiyabulela kwaye undenzele Ngaphandle koko andinakuthetha nabazali bam kunye nosapho lwam, ndixelele ukuba ndibhale ntoni ngeGmail izakundinceda ukuba unako, kulungile, ndiya kukuvumela ukuba uye eziklasini kwaye kufuneka undincede kuba iklasi imini yonke kwaye unethamsanqa lokuba ndiyakwazi ukuthetha iSpanish. Usale kakuhle kwaye undincede.
Phendula u-sandra uphawule:
Amagama omnxeba we Carolina sitsho
NDIFUNA UKUBA NE-AKHAWUNTI NCEDA UNGAQONDI
mmmmm kakuhle ndiyathanda i-xatear eninzi;)
kodwa andazi ukuba ngubani igama lomsebenzisi kwaye andinako
plisss ndixelele ukuba yintoni
Molweni nonke, ungandixelela ukuba uyenza njani iakhawunti yezimvo?
ibhulorho eluhlaza yintlama sitsho
Molo, ndiyi pulp, ndinika ipts kuyo nayiphi na i-bago naphi na
Phendula kumdaka webhulorho eluhlaza
juan manuel rocha monk sitsho
Ndifuna ukwenza i-imeyile yam gemail.com
Phendula u-juan manuel rocha monje
Ndifuna ukuvula imeyile yam gmal.com
Ndiyenza njani i-imeyile ye-gmail.com?
Molo, kutshanje ndikwenzele iakhawunti, ndanyathela iselfowuni ndaza ndacela idilesi. Vumelana, uyifumana njani idilesi?
molo ndiyenza njani i-gmail
Umntu othile uyile indlela endiyenze ngayo i-gmail, nceda undazise
Molo, MNTU UNGANDINCEDA. NDIFUMANA IMEYILE KWI-GMAIL AKHAWUNTI KWI-MAIL YAMI YAHOO KWI-ANONYMOUS KUNYE NDINGATHANDA UKUBONA IDILESI YENKQUBO KWAKHONA KANYE AYIBONISI, IYANDIBonisa INDLELA YOKUQALA KWENKONZO. NDINGayibona njani i-IP ye-imeyile ye-imeyile. ENKOSI
Andazi ukuba ndiyenze njani i-gmail
Ndinqwenela ukuba bendine-gmail ... iakhawunti kaGoogle ayisebenzi okanye into enjalo
Andazi ukuba ndiyenze njani iakhawunti yam